Guriga Wuxuu Ka Bilaabmaa Jidhka - Amjambo Africa
Guriga Wuxuu Ka Bilaabmaa Jidhka
Waxaa Qoray Kholiswa Mendes Pepani
Go’aansashada inaad guriga ka baxdo oo aad mar labaad ka bilowda meel cusub weligood ma fudud. Ka bixida ka tagista bilowga aan la hubin waxay u baahan tahay geesinimo iyo adkeysi.
Iyadoo rajada imaatinka meel cusub ay bixin karto nafis iyo rajo fursado cusub, socdaalka waxaa ka buuxa cadaadis maskaxeed oo aan tiro lahayn oo ka dhigaya la qabsiga bulsho cusub mid aad u adag. Isbeddellada baaxadda leh iyo khasaaraha soo foodsaaray waa go’doomin, iyo marka dareenka caajisnimada guriga iyo kala go’a ay bilaabaan inay u muuqdaan murugo ama walaac aan laga bogsan karin – way adkaan kartaa in la ogaado meel loo leexdo. Natiijo ahaan, qaxooti badan iyo soo galooti ayaa la ildaran aamusnaanta iyagoo leh dareen shisheeye, rajo la’aan, iyo niyad jab. Laakin waa wax dabiici ah in lala halgamo isbeddelka qaska ah, gaar ahaan marka safarka laftiisa uu yahay mid naxdin leh.
Qaxootiga iyo magangelyo-doonka, waxay u janjeeraan inay dhabarka u ritaan culayska dhibaatooyinka kala duwan iyadoo la tixgalinayo in lagu khasbay inay ka baxaan guriga, waxaan la kulmeen cadaadis iyo dhibaato weyn ka hor iyo intii ay safarka ku jireen.
Leopold Ndayisabye, Madaxweynihii hore ee ururka Ruwaanda ee Maine, horena u ahaan jiray kiis-yaqaankii Preble Street, ayaa sharraxay in halgankii ugu adkaa ee la xidhiidha geeddi-socodkii loogu gudbayo Maraykanka oo ka adkaaday dagaalka iyo dhaawacyada, luminta taageerada bulshada iyo qoyska, shaqo la’aanta iyo walbahaarka guryaha. cunsuriyadda iyo takoorka, iyo cadaadiska lagu dhaqmo.
“Laqabsiga qaab nololeedka cusub aad bay u adag tahay. Si lama filaan ah ayaad u timaad iyada oo aan waxba haysan oo waxaad dareemi kartaa luminta aqoonsiga, sida ma jirto awood aad naftaada ku ahaan karto. Mainers Cusub ayaa ka kala imaanaya bulshooyin kala duwan oo taageero ah oo leh door dhaqameed gaar ah. Waxay isu arkaan inay gebi ahaanba go’doon yihiin oo ay ka fog yihiin bulshada. Isbeddelkan ba’an wuxuu abuuri karaa kalsooni daro iyo markaad isku kalsoonida weydo, sidee ku aamini kartaa in kuwa kale ay rabaan inay ku caawiyaan.”
Ndayisabye waxa uu sii waday in uu sharaxo in ka dib marka ay galaan safarkaas cashuurta jidheed, maskaxeed, iyo shucuureed, qaxoontigu waxa ay ku dhibtoon karaa nin ay dareemaan badbaado taas ay keentay in ay qaadaan dareen shaki badan iyo feejignaan sare, taas oo adkeynaysa in la hagaajiyo ama la codsado caawimaad. “Qaxooti badan ayaa la halgamayay sidii ay cunto u heli lahaayeen, waxay la halgamayeen sidii ay biyo u heli lahaayeen, iyagoo u halgamaya badbaadada aasaasiga ah ka hor intaysan iman Maine. Xaaladdan ayaa si dabiici ah u saamayn wayn ku leh caafimaadkooda maskaxeed”.
Marka laga soo tago in laga boodo caqabado nafsi ah iyo dhismeed oo kala duwan—mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan daryeelka soogalootiga waa xaaraanta la xiriirta cudurka dhimirka. In kasta oo wada sheekaysiga dhaqammada kala duwani ay horumar la taaban karo ka sameeyeen baabi’inta dhaleeceynta ku xeeran caafimaadka dhimirka, qoysas badan oo Afrikaan ah iyo Koonfurta Ameerika waxay sii wadaan inay la halgamaan wax ka qabashada cudurka dhimirka. Tiro badan oo ka mid ah qoysaskan soo-galootiga ah ayaa u arka caqabadaha caafimaadka dhimirka si xun – guud ahaan waxay ku xidhan tahay daciifnimo ama hay’ad joogto ah. Natiijo ahaan, soo jeedinta kaliya ee raadinta dhakhtarka cilmi-nafsiga ayaa loo qaadan karaa cay iyo khatar ku ah hannaankii socdaalka. Ndayisabye ayaa yiri, “sababto ah caafimaadka dumarka waa mamnuuc inta badan dhaqamada Afrika, in badan oo ka mid ah qaxootiga ayaan dooneyenan inay ka hadlan dhaawacyadooda, waxaa jira cabsi ah in la shego xanuunkooda. Dib u soo kabasho aan caafimaad qabin ayaa dhisma, oo marka ay keligood yihiin ama dareemaan ammaan ku filan, xanuunka la cadaadiyo wuxuu u soo baxaa sidii burbur – markaas faragelintu aad bay u daahday”.
“Soo galootigu waxay ku dhamaadaan si aad u adag si ay u badbaadaan, dhamaadka, waxay qaadanaysaa qayb iyaga ka mid ah. Qoysaskoodu way kala tagaan, carruurtoodu ma xamili karaan, dhammaan sababtoo ah waxay aad uga baqayaan inay sheegay inay ku adag tahay inay la qabsaday arrimaha nafsaaniga ah
Dhibatoyinkaan waxaa u sii dheer helitaan la’aan ba’an oo kheyraad ah. Marka dadka cusubi yimaadaan waxay haystaan daryeel caafimaad oo xadidan iyo habka taageerada bulshada. Maaddaama intooda badani aanay ku hadlin Ingiriisi, xannibaadda luqaddu waxay noqotaa niyad-jab dheeraad ah. Iyadoo barnaamijyada bulshadu ay ku dadaalaan sidii ay u caawin lahaayeen, qaab-dhismeed la’aanta, dareenka dhaqanka, iyo maalgelinta ayaa hoos u dhici karta si loo hubiyo in qoysasku awoodaan inay koraan muddo dheer. Tani waxay jebinaysaa suurtagalnimada aaminaadda oo inta badan ku guuldareysta in la dhiso marka ugu horeysa ee qaxootigu yimaadaan
Sida uu qabo Abusana Micky Bondo, oo ah aasaasaha In Her Presence, oo ah hay’ad aan faa’iido doon ahayn oo diiradda saareysa xoojinta haweenka soogalootiga ah ee Maine, baahida naxariista iyo dareenka fiiqan ee kartida dhaqameed ayaa muhiim u ah soo dhaweynta Mainers Cusub ka hor inta aysan ku dhex lumin bulshada dhexdeeda. iyada oo aan lahayn shabakado taageero oo ku filan. Markii ugu horeysay ee Bondo ay la kulantay Claudette Ndayininahaze, oo ah aasaasaha Aasaasaha iyada, haweenku waxay heleen inay ka hadlaan halganka baaxadda leh ee iyaga laftooda ay la kulmeen dumar soo galooti ah oo midab leh, oo ay dareemeen lagu qasbay in la abuuro meel bannaan si loo xoojiyo haweenka soogalootiga ah. Labada haween waxay go’aansadeen inay bilaabaan iyagoo martigelinaya fasalka yoga ee haweenka muhaajiriinta ah lagu qasbay in la abuuro meel bannaan si loo xoojiyo haweenka soogalootiga ah. Labada haween waxay go’aansadeen inay bilaabaan iyagoo martigelinaya fasalka yoga ee haweenka muhaajiriinta ah.
“Markii ugu horeysay 12 haween ah ayaa yimid, waxaana ku bilownay turjumaada muujinta -markii aan bilownay inaan sharaxno waxyaabaha waxaa caddaatay inay kaliya welwelka naga celinayaan inaan ogaano sababta ay u yimaadeen. Markii aan bilownay inaan dhageysanno dhammaan sababaha, waxaan ogaannay inaan u baahannahay inaan dhisno barnaamij taageero ah oo ka sii adag si codkooda loo maqlo-barnaamij aan ku bilaabi karno dhisida xeelado aan uga gudubno caqabadaha na soo food saartay. Cid noo qaban karta ma jirto. Waan dhisi karaa xulafo, laakiin waxaan u baahneyn inaan istaagno qoysaskeena iyo nafteena. Waxaan nahay haween, hoyoyink, iyo xaasas; anagu waxaanu nahay duuliyayaasha guryahayagii, anaga ayaana u baahnaa inaanu samayno”.
Awooda Bondo ee lagu caawinayo kuwa kale iyo in la xakameeyo farqiga ka maqnaa bulshada waxay ahayd guul. Markii hore ururku wuxuu u halgamay sidii loo heli lahaa maalgelin iyo aqoonsi, laakiin iyada oo la joogo hadda waxay noqotay tiir taageero u ah qoysas badan oo tahriibayaal ah. Ururka ayaa haweenka siiya qalab ay ku taageeraan qoysaskooda. Caqabadaha luqaddu waxay kala soocaan kuwa cusub inay yeeshaan madax-bannaani buuxda oo ku aaddan noloshooda gaarka ah, marka iyada oo la joogo waxay abuurtay barnaamij la yiraahdo “Raadi Codkaaga,” kaas oo ka shaqeeya abuurista Erayada macnaha guud ee si guul leh loogu tago dhakhtarka, bangiyada, iyo dugsiyada.. Intaa waxaa dheer, waxay martigeliyaan aqoon-is-weydaarsiyo waalidiinta si ay si fiican u fahmaan ubadkooda u wareejinta Maraykanka iyo sidoo kale bixinta taageerada shaqo iyo xiriirka.
Bondo waxa ay ku nuuxnuuxsatay in xaaraanta ku xeeran caafimaadka dumarka ay marka hore ku adkaynayso haweenka in ay la qaybsadaan dhibaatooyinkooda. “Sababta oo ah xaaraanta, waxaan ku dhammaaneynaa socodka diidmada. Way adag tahay in la aqoonsado in laga yaabo inaad dhibaato qabto, gaar ahaan haddii aadan garanayn sida ay u egtahay. \_” Dad badan oo ku dhibtoonaya waxay u jeestaan walxaha si ay ula qabsadaan walaaca iyo niyad-jabka.
“Soo galootigu waxay ku dhamaadaan si aad u adag si ay u badbaadaan, dhamaadka, waxay qaadanaysaa qayb iyaga ka mid ah. Qoysaskoodu way kala tagaan, carruurtoodu ma xamili karaan, dhammaan sababtoo ah waxay aad uga baqayaan inay sheegay inay ku adag tahay inay la qabsaday arrimaha nafsaaniga ah,\_” ayuu yidhi Bondo. \_”Way adag tahay markaad ka timaaddo meel aan waxyaabaha waligood laga hadlin.”
Iyada oo ay joogto waxa ay bilawday martigelinta aqoon iswaydaarsi sanadkan oo ay la yeelanayaan bixiyeyaasha caafimaadka ee loo yaqaan “Bogsii jidhkaaga\_” iyada oo la isku dayay in la bilaabo wada hadalka ku saabsan caafimaadka dhimirka. \_”Markii kalkaalisada ay bilowday inay ka hadasha calaamadaha, haween badan ayaa bilaabay inay jabaan. Deganaanshaha, waxay awoodeen inay aqoonsadaan in tani ay tahay waxa ay soo mareen – inay leedahay magac, iyo daaweyn. Waxay awoodaan inay ogaadaan in maskaxdooda ay la halgamayso sababtoo ah cadaadis badan, dhaawac, iyo shaqo dheeraad ah. Waxaan u baahanahay inaan magacaw, si aan u helno caawimo”.
Si loo caawiyo asxaabta iyo qoyska laga yaabo inay ku dhibtoonayaan, waxaa muhiim ah in la aqoonsado calaamadaha, oo la helo hab fahansan asalka dhaqanka. Ku tiirsanaanta kaniisadaha maxalliga ah iyo bulshada qofka si ay u taageeraan waa tallaabo hore oo waxtar leh.
Waa maxay calaamadaha iyo calaamadaha hoos u dhaca caafimaadka miskaxda
Sida laga soo xigtay Ururka Cilmi-nafsiga ee Maraykanka, calaamadaha digniinta ugu horeeyay ee sii xumaanaya caafimaadka dhimirka waa..
Hurdada ama rabitaanka cuntada ayaa is beddesha – Hurdo iyo rabitaanka cuntada oo isbedela ama hoos u dhaca daryeelka shakhsi ahaaneed.
Ka-noqosho – Ka-noqosho bulsho ee dhawayd iyo luminta xiisaha hawlihii hore loogu raaxaysan jiray
Dhibaatooyinka fekerka – Dhibaatooyin xagga u fiirsashada, xusuusta ama fikirka macquulka ah iyo hadalka oo ay adag tahay in la sharaxo ama qofka agagaarkiisa; Dareen aan xaqiiqo ahayn
Nervousness — Cabsida ama shakiga dadka kale ama dareen neerfaha oo xooggan.
Haddii adiga, ama qof aad jeceshahay uu la halgamayo mid ka mid ah calaamadahan caafimaadka dhimirka, ama ku fikiraya inaad naftaada ama dadka kale waxyelo uu geysato, waxaa laga yaabaa inay tahay waqtigii aad heli lahayd gargaar. Fadlan wac khadka qalalaasaha Maine 1-888-568-1112 ama wac 911 ama tag qolka gargaarka degdega ah ee kuugu dhow si aad gargaar u hesho. Ka hadalka caafimaadka dhimirka waa wax aan raaxo lahayn oo mararka qaarkood aan la aqoon, laakiin u furista iyo ku tiirsanaanta qof kale si ay u taageeraan waxay gacan ka geysan kartaa in la sameeyo isbeddel si looga gudbo maalmaha ugu madow. Xitaa marka qof ka fog yahay waxaa jirta rajo, taageero, iyo dariiqooyin lagula tacaali karo. Waa inaan is ilaalino nafteena oo dhan sababtoo ah gurigu wuxuu ka bilaabmaa jidhka.
PreviousMaxaa dhacaya Augusta kalfadhigan sharci-dejinta?
NextSida loogu diyaargaroobo xilliga cashuurta